“Waan ka murugooday in shaqada Barcelona laga eryo Ernesto Valverde” – Lionel Messi – Gool FM
(Barcelona) 20 Feb 2019. Kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa muujiyay sida uusan ugu faraxsaneyn in shaqada laga ceyriyay tababare Ernesto Valverde bishii hore, isagoo cadeeyay inuusan u qalmin sababa la xiriira inuu yahay tababare weyn.
Lionel Messi ayaa difaacay macalinkiisii hore ee Ernesto Valverde intii uu ku gudi jiray waraysi uu siinayay wargayska “Mondo Deportivo” ee dalka Spain, kaasoo uu kaga hadlay dhowr arrimood ee ku saabsan kubadda cagta iyo mustaqbalkiisa naadiga reer Catalonia.
Messi ayaa la weydiyay su’aal ku saabsaneyd aragtidiisa kaga aadan shaqo ka ceyrintii lagu sameeyay Ernesto Valverde wuxuuna yiri:
“Waqtiyadaas si xun ayaan ku noolaa, sababtoo ah waxaa naga tagay shaqsi iyo macalin weyn, wax badan ayaan sheegay arrintaas, waxaa jiray kulamo badan oo aan mas’uuliyadeedu dhabarka u ridaneyno in ka badan isaga”.
“Laakiin ugu dambeyntii, waxa ugu fudud ayaa ah inaad tuurto macalinka oo aad ka takhalusto isaga, inta aad badeli laheyd dhamaan ciyaartoyda, tababarayaashana way fahmayaan inay tani qayb ka tahay shaqadooda”.
“Aad ayuu noogu dhowaa, wax badan ayuu nala hadli jiray, wuxuuna wax badan ka fikiri jiray faahfaahin walba, aad ayuu u jecel yahay kubadda cagta, wuxuuna si joogta ah uga hadlaa arrintaas”.
“Waa wax iska caadi ah inay jiraan qeylo ku saabsan natiijooyinka qaar ee xun, kaddib bixitaankii Valverde, taageerayaasha mararka qaar waa ay kacsan yihiin”.